Fitsaboana amin'ny tadin'ny homamiadana tiroida - homamiadana tiroida - Proton CA
Fomba fanafody Proton ho an'ny homamiadana tiroida
Miady amin'ny homamiadana tiroida miaraka amin'ny famaritana mitovy amin'ny laser
Ny teknolojia fanaraha-maso beam-piraisan-doko any California Protons dia fomba iray marim-pototra amin'ny fikarakarana ny homamiadan'ny tiroida ao amin'ny tiroida, izay ahafahan'ny dokotera mikendry ny tendron'ny tiroida miaraka amin'ny taratra faran'izay avo be ao anatin'ity faritra saro-pady sy saro-pady ity.
Raha ampitahaina amin'ny fitsaboana fitsaboana proton passive-miparitaka taloha ho an'ny homamiadan'ny tiroida, ny teknolojia scan-be-pensilihazo dia manome ny fikarakarana taratra ho an'ny homamiadan'ny tiroida ao anatin'ny 2 milimetatra ary amin'ny fikarakarana tanteraka. Azontsika atao ny mamely ny fivontosan'ny fivontosana amin'ny alàlan'ny fivontosana ary manamaivana ny fihanaky ny vatan'ny taolana mahasalama. Zava-dehibe ho an'ny marary ny homamiadan'ny tiroida izy io satria matetika dia mitaky dosie avo lenta ny taratra. Ny fiparitahan'ny sela mahasalama manodidina ny fivontosana dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahaizanao miteny, mihinana, manandrana ary mitelina, ary afaka manova ny bika aman'endrinao na maharitra vetivety na maharitra. Ny fampihenana ny poizina mifandraika amin'ny taratra dia mampitombo ihany koa ny fahafahan'ny marary mameno ny fitsaboana amin'ny fampiatoana na fanemorana kely kokoa.
Ny homamiadana tiroida
Ny homamiadana tiroza miverimberina
Arovy ny tsofinao, vata fanamafisam-peo, havokavoka ary tadidinao
Hikazona ny fiainanao tsara mandritra ny fitsaboana ny homamiadana tiroida
Mampihena ny voka-dratsin'ny fitsaboana, anisan'izany ny fahaizana miteny, mihinana, manandrana ary mitelina
Tombontsoa azo avy amin'ny fitsaboana Proton ho an'ny homamiadana tiroida
Ny fitsaboana protonol mivaingana ho an'ny homamiadan'ny tiroida dia mamela ny dokotera amin'ny fomba voafantina tsara kokoa amin'ny taratra fantsom-panafody mahery amin'ny hozatra sy hozatra amin'ny tiroida, ary mampihena ny fatra amin'ny sela mahasalama sy taova mihaingo. Amin'ny toe-javatra sasany, izany dia naseho mba hanomezana fitsaboana haingana kokoa noho ny fitsaboana taratra X-ray na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza.
Ny fitsaboana aram-bohitra Proton dia mametraka ny angovo faran'izay mihetsika mivantana ao amin'ny fivontosana, izay mety hampihena ny fihanaky ny taratra any amin'ireo taova saro-pady sy ny taova mahasalama ao anatiny sy ny manodidina ny vava, ny tendany ary ny tratra.
Ny fihanaky ny tavy mahasalama manodidina ny fivontosan'ny tiroida dia tena zava-dehibe satria ny fahasimbana amin'ity faritra ity dia mety hisy fiantraikany manan-danja, toy ny faharatsiana tsy maharitra na maharitra mandritra ny fahafahanao miteny, mihinana, manandrana ary mitelina.
Tsy toy ny haitao taloha, ny drafitra fitsaboana fitsaboana homamiadana tiroida dia azo ampidirina ao anaty solosaina ary vita ao anatin'ny minitra vitsy. Ny fitsaboana ihany koa dia tsy misy dikany ary azo alain-tahaka ka ahafahan'ny marary miverina haingana kokoa amin'ny asany isan'andro.
Therapy ho an'ny tiroida ve ny proton?
Arakaraka ny sehatra ny homamiadan'ny tiroida, ny fitsaboana mitambatra, ny fitsaboana radioodio sela, ny fitsaboana simika sy ny taratra dia mety ilaina amin'ny fivalanjan'ny tiroida sasany. Ny safidy fitsaboana amin'ny homamiadan'ny tiroida koa dia voakasiky ny karazana homamiadan'ny tiroida, taona, ny fahasalamana ankapobeny sy ny safidin'ny tena manokana.
Fitsaboana Proton ho an'ny valin'ny fitsaboana homamiadan'ny tiroida sy ny vokany maharitra
Ny fitsaboana fitsaboana Proton ao amin'ny California Protons cancer Therapy Centre any San Diego dia mety hanolotra valiny mitovy amin'izany amin'ny taratra X-ray manara-penitra, raha mampihena ny vokatra maharitra sy mety hanimba ny fiainana toy ny tsy fahaizana miteny, misakafo, manandrana ary mitelina noho ny aretina fahasimban'ny taratra amin'ny loha, tendany ary tenda. Mety hihena koa ny kansera faharoa any aoriana any amin'ny fiainana noho ny fihenan'ny tara-pahazavana amin'ny sela sy ny taova mahasalama manodidina anao.
Fikarohana fikarohana manohana ny fitsaboana ny proton ho an'ny homamiadan'ny tiroida
Ny mety hisian'ny radiotherapy proton hozatra hampihenana ny tsy fahampiana amin'ny fitsaboana ny homamiadan'ny loha sy ny tenda: Fandinihana fampitahana drafitra